Atileet Siifan Hasan: Akka kaanis ta’u baatu Finfinneefi Sulultaatti lafa bitadheera’ | Kichuu
(bbcafaanoromoo)–Atileetin fiigicha fageenya gabaabaas ta’e dheeraa fiigdetti milkaa’u qofa osoo hin taane riikardiillee cabsuutti jirtudha atileet Siifan Hasan.
Sadarkaa atileetiksii dubartootaa dhabbanni kuni baruma keessa jirru baasen atileetin dursaa jirtu atileetii dhalootaan Itoophiyaa garuu Nezerlaandif kan fiigdu Siifan Hasanidha.
“Atileetin ani sodaadhu hin jiru. Mo’achuu malee tasa mo’atamuu hin barbaadu” jetti shamarreen umurii waggaa 26 fi shaampiyoonaan addunyaa Siifan Hassan.
“Itoophiyaadhaaf akkan fiigu namni na gaggaafate jira. Ani garuu odoon fiigee jedhee hawwee hin beeku. Yoo biyyi Oromoo bilisa baate malee” jechuunis dubbatti.
Atileet Siifan Haasan riikardii addunyaa waggaa 23’f ture cabsite
Ammammoo atileetota dubartoota fageenya giddugaleessaa baha Afrikaaf qormaata cimtuu taaterti. Turtii Siifan Hasan walin taasifne iddoo dhalootaa fi imala gara baqattummaa gaafachun eegalle. Itti dhihaadhaa!
Gara biyya Neezarlaand umriikoo naannoo waggaa 15 yookin 16ttin deeme. Yeroo sanatti as biyya keessa jireenyaafis ispoortiifis baay’ee namatti hin tolu ture. Achumatti hafuuf itti yaadeen deeme.
Ala baay’een jaaladha. Achi deemee barumsa eegaleen ture. Ijoollee ispoortii hojjetantu akkan ispoortii eegalu na taasisan.
Waliin jireenyi hawwaasummaas ni baay’ata. Yeroon achi dhaqu akka tasaa bakki gaarinillee nan geenye. Mana ‘under age’ jedhamu na gahe. Yeroo hunda balballi ni cufama. Animmo nama ala baay’isu.
Haadha koo waliinillee sababa sanif wal lolla ture. Kanaaf waggaa tokkof rakkachaan ture. Nama Oromoo dhiisi nama Itoophiyaatinu wal hin agarre. Yaadni biyyaas sammuu koo keessa deddeebi’aa ture.
BBC: Yeroo tokko “atileet Fayyisaan anaaf goota kooti” jettee turte. Gootummaansaa gama kamiini? Fiigicha yeroo eegaltuhoo atileetin fakkeenya godhatte jiraa?
Siifan: Atileetin ani ilaalee akkas ta’e jedhe hin jiru. Ani intala musliimaati. Warri koo Islaama. Kanaafu gara fiigichaa kana wanti akkasin ta’a jedhu hin jiru ture.
Barsiisaa sana walin bakka fiigichaa deemee namittin tokko na ilaaltee “intalli kun dandeettii qabdi fiigicha eegaluu qabdi” jettee kophee naaf bitte. Sana booda garuu barumsa narsii barachaa waan tureef baay’ee natti ulfaate.
Boodas akka tasaa federeeshinii atileetiksii ‘Dutch’ [maqaa biraa Neezarlaand] argadhee akka na gargaaru natti hime. Isaan bira bara 2012 seenee bara 2013 dorgommii Diyaamand Liigii dorgomee nan milkaa’e.
Bara 2014 immoo atileetota olompikiifaa fiigan mo’achuu eegale. Milkaa’inni kiyyas akkuma nama har’a ka’ee boru milkaa’e ta’e. Kolfa…
Fayyisaan ummata Oromoof waan baay’ee godhe. Inni rakkoo sana mul’isuu isaatin namootni dhufanii “harka qaxxaamuruun maal jechuu dha?” jedhanii na gaafatu turan.
Yeroon hiikaasaa itti himus faranjootnifaa ni boo’u turan. Kanaaf akka malee isa dinqisifadha.
BBC: Dhiyoo kana shaampiyoonaa addunyaa irratti meetira 1,500 fi 10,000 warqee argatte. Keessattuu meetira 10,000 kan atileetotni Itoophiyaa ittin beekkaman mo’achuun kee hiikaa adda ta’e qabaa?
Siifan: Eyyeen hiikaa adda ta’e naaf qaba. Ani fiigicha dheeraa marsaa isteediyeemii baay’atu hin jaaladhu. Kan nuffisiisu natti fakkaata. Kana duras hin fiigu jedheen ture. Leenjisaa kiyyatu bara darbe 10,000 ni fiigda naan jedhe.
Anis fiigichi koo meetira 1,500 baay’ee badaa waan turef “of adabuun qaba” jedhee “tole” jedheen. Sana booda warqee argadhe… kolfa…. Kanaaf baay’ee itti gammadeera.
BBC: Fiigicha fageenya garaagaraa fiigda. Fageenyawwan kunneeninis milkaa’aa jirta. Sababnisaa maali?
Bara 2017 as garuu yoon moo’es yoon mo’atames viidiyoo dorgomichaa irra deebi’een ilaala. Kanaafuu hin muddamu. Irra guddaa garuu sababni isaa shaakallii dha. Xiyyeeffannoo fi yeroo koos isumaaf kenna.
Atileet Fayyisaa Leellisaa: ‘Meedaaliyaan Riyoo yaadannoo wareegamtootaati’
Siifan: Gama kilabiitin atileetotaaf deeggarsa gochuurratti Itoophiyaatu caala. Neezarlaand keessa waan akkasii hin qaban. Kilaba yoo ta’es situ waa kaffala.
Federeeshinii walin wal hin loltu. Sa’aatin kee gaarii taanaan “maal sif goona? Kaampii kam deemta? Akkam sif goona?” jedhanii kan kunuunsan isaani.
Leenjiif biyya biraa yoo deemtes “hoteela keef sif kaffalla. Nyaata keef sif kaffalla” jedhanii si kunuunsu.
BBC: Atileetiksii erga eegaltee booda wanti buufatte maali? Atileetotni heddu investimantii irratti yeroo bobba’an mul’ata. Gama kanaan ati maalirra jirta?
Siifan: Naannoo Rufaa’eeli [Finfinnee] fi Sulultaa lafa bitadheera. Ani atileetii reefu guddataa jirtu dha. Amma argataan jira malee akka warra duraanii sana birrii miiliyoona yookin biiliyoona warra kaayate sanaa miti… kolfa….
Siifan: … kolfa… Duraan atileetii osoo hin taanee fiigichan sodaadha ture. Mo’achuun barbaada. Tasa mo’atamuu hin barbaadu. Atileetin sodaadhu hin jiru.
Atileetin cimtuudha jedhee yaadu Almaaz Ayyaanaati. Isheen baay’ee jabduu dha. Ishee nan dinqisiifadha.
Siifan: Facebook nan fayyadaman ture. Ergan balleesse garuu waggaa lama ni ta’a. Yerookoo na jalaa fudhata. Yeroon fiigicha fiige al tokkon ‘message’ dhibba yookin kumaatu naaf ergama. Kanaaf sa’aatii isa ittin ilaalu hin qabu.
Namni akka kootii of beeksisuuf miidiyaan hawwaasummaa isa barbaachisa. Ani garuu fiigicha irratti qofa cimtuu yoon ta’e na gaha. Namni na beekes beekuu baates… callisa…
BBC: Gama gaa’elaatinhoo akkami? Bultii ijaarattee?
Siifan: Nikaa dhiyoo kanan godhadhe. Ji’a jaha ni ta’a. Abbaan warraa koo immoo nama Wallaggaa Naqamteedha… kolfa…
‘Aangoon dhiibbaa dhiigaaf na saaxile’
Ani Albeertoon nama gaarii, nama namaaf yaadu ta’uu isaan beeka. Atileetota baay’ee gargaara. Guyyaa ayyaanaallee atileetota shaakalsiisa. Ergan ani isa bira deemee waggaa lama. Isa bira deemuu koon durallee sa’aatin [kan dorgommii] koos gaari ture.
Meedaaliyas nan qaban ture. Ani bar ganamaa galgala na qoratu. Ispoortii qulqulluuttin amana. Garuu dhimmichi baay’ee na gaddisiise. Xinsammuu koollee na miidhera.
BBC: Dorgommii Olompikii bara 2020f qophaa’aa jirtaa? Fageenya kan irratti dorgomuuf yaadde?
Siifan: Akkuma baranaa damee hundarratti nan qophaa’a. Meetira 800 hanga 10,000 nan hojjedha. Haa ta’u malee, yeroo sana irratti kam irratti cimaa akkan ta’u nan ilaala. Garuu meetira 5,000 fi 10,000 kanin filadhu natti fakkaata.
Ethiopia | “ኦሮሚያ ነፃ ካልወጣች ለኢትዮጵያ አልሮጥም!”